नेपाली कथा: फुलमती भालु को आत्मब्रितान्त
फुलमती भालु को आत्मब्रितान्त
मैले पुती चिकाउने गर्न थालेको २० वर्ष एक महिना भइसक्यो । मेरो पुती चिकाउने जीवनमा धेरैजसो चिकाई पुरुष सहकर्मीसँगै भयो। आँखा जुधाएर टंगकिस खाँदै चिक्ने पुरुष मनपर्छ मलाई । आँखामा आँखा जुधाएर नचिक्ने मान्छेमा आत्मविश्वास नभएजस्तो लाग्छ । भियाग्रा, कंडम, नया नया चिक्ने स्टाइलबारे वेल इन्फम्र्ड नभएका पुरुषसँग चिकाउन मन पराउँदिनँ । अनि, सस्तो तरिकाले चिक्दै हिँड्ने पुरुषसँग पनि मेरो ग्रह मिल्दैन । मेरो आदर्श नम्रता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । मैले पहिलोपटक चिकेको पुरुष पनि डीजे तान्त्रिक नै हो । पूटाङजस्तो दुर्गम ठाउँमा राउटे बाहेक अरुसंग चिकाउन पाइँदैनथ्यो । त्यस्तो ठाउँमा जन्मेकी मैले डीजे तान्त्रिक कारण त्यसताका पनि पूजा लामा, नम्रता श्रेष्ठ र अन्य स्थानीय चिकुवा भिडियो हेर्न पाएँ । त्यतिमात्रै होइन, तान्त्रिक मलाई नक्कली लाँडो समेत किनिदिनुभएको थियो । उहाले नक्कली लाँडोका माध्यमले मेरो ‘चिक्ने पावर’ को बिकास होस भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । मलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘मनमा चिकेको कुरा मात्र खेलाउने होइन, कहिले काहीं साँच्चिकै चिक्नु पनि पर्छ र अरुले चिकेको पनि ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ’
पछि, हरेक पटक पुती चिलाएको बेलामा डीजे तान्त्रिकलाई खुब सम्झन्थेँ । र सम्भिन्थेँ- डीजे तान्त्रिकले मेरा लागि किनिदिनुभएको नक्कली लाँडो ।
ठुलो लाँडो भएको, पुती च्यात्तिने गरेर चिक्न जान्ने, १ घन्टा सम्म ननस्टप हान्ने पुरुष मनपर्छ, मलाई । चिक्रीनारायण शाह ठुलो लाँडो भएको, पुती च्यात्तिने गरेर चिक्न जान्ने, १ घन्टा सम्म ननस्टप हान्ने सबभन्दा भव्य प्रतीक हुन् । यी तीन गुणले नै गोरखा देखि राजधानी सम्मका कुमारी केटीहरुको सिल तोड्न सम्भव भएको थियो उनलाई । हामी चिकुवा हौँ भनेर विश्वसामु गर्व गर्ने वातावरण त उनै चिक्रीनारायण शाहले बनाइदिएका हुन् नि ! त्यसैले उनी ठुलो लाँडो भएको, पुती च्यात्तिने गरेर चिक्न जान्ने, १ घन्टा सम्म ननस्टप हान्ने पुरुष हुन् । ‘सबै भन्दा धेरै चिकुवाहरुको देश’ बनाउने क्रममा यहाँ सबैका पुती ध्वस्त भए । कत्तिका पुती च्यात्तिए । जान-अन्जानमा उनको कति पटक नाईटफल पनि हुन्थ्यो भन्छन, ती गौण मानिन्छन् । धेरै चिक्नेलाइ नाईटफल त भइहाल्छ । त्यसैले उनी क्षम्य छन् । म अहिले पनि चिकुवा चिक्रीनारायण शाहजस्ता पुरुषको कल्पना गर्छु । जोदेखि म सधैँ प्रभावित छु । यसको मतलब सबै पुरुष उनीजत्तिकै ठुलो लाँडो भएको, पुती च्यात्तिने गरेर चिक्न जान्ने, १ घन्टा सम्म ननस्टप हान्नेहुनुपर्छ भन्ने होइन । डाईट नै नपाइने यो जमानामा त्यो सम्भव पनि छैन । चिक्न र चिकाउन जान्ने खूबी महिला र पुरुष दुवैमा हुनु जरुरी छ, यदि जीवनमा मोज गर्ने हो भने । पुती चाट्ने क्षमता भएका पुरुष लोभलाग्दा हुन्छन् । पुती चाट्ने क्षमता र चुस्न रहरै लाग्ने ठुलो लाँडो भएका पुरुष पलासको फूलमा सुगन्धझैँ हुन्छन् । इतिहासमा लंडबहादुर राणा यस्तै पुरुष हुन् भन्ने लाग्छ, मलाई । ग़ुलाशमशेरको पालामा पहिलो ब्लू फिल्म भित्रीए पनि, ब्लू फिल्मको लागी ईस्ट इण्डिया कम्पनीसंग लंडबहादुर राणाले नै माग गरेका थिए । मलाई पनि ब्लू फिल्म उत्तिकै मनपर्ने हुनाले पनि उनलाई सधैँ सम्मान गर्छु । किनकि, बेलायतबाट र्फकंदा उनैले डीभीडी, र चिकुवाको कलेक्सन ल्याएका थिए । उनको चिकिरहनु पर्ने व्यवहारले पनि मलाई प्रभाव पारेको हो । बेलायत भ्रमणमा जाँदा रानी एलिजाबेथकी बहिनीलाइ देखेर लंडबहादुरले भनेका थिए, ‘ म नेपालबाट गोरिनी चिक्नको लागी मात्रै आएको हूँ, यहाँ आएर मन परेकी गोरिनी चिक्न पाइन भने त्यो मान्य हुने छैन ।’ एलिजाबेथकी बहिनी न्याकेड भएर एअरपोर्टमा स्वागत गर्न आएपछि मात्रै उनले बेलायत टेकेका थिए । लाँडोको वरीपरी झांट राख्ने र गुला वारिपरी खुर्किने उनले परिकल्पना गरेका थिए । उनको यो दूरदर्शी परिकल्पना व्यवहारमा उतारिएको थियो भने आज सबैको स्टाइल त्यही हुने थियो। उनको यिनै सेक्सी नीतिले मजस्ता अरू धेरैको पुती चिलाएको हुनुपर्छ ।
राजाले भन्दा पहिले रानीको पुती आफुले चिक्न पाउने उनको स्वनिर्णयले सबै रानीको पुतीको स्वाद चाखिसकेका थिए । रानीहरुलाइ कट सिकाउन नया नया बिदेशी ब्लू फिल्मका डीभीडी भित्र्याउने काम उनैको पालादेखि सुरु भयो । भारतमा आएदेखि चिकाउन नपाएका अंग्रेजका स्वास्नीहरु घुम्न जाने बहाना बनाएर खुसु खुसु लंडबहादुरलाइ भेट्न आउन थाले। मस्त चिकाएर फर्किने बेलामा लंडबहादुरले उनिहरुका पोईहरुका लागी भनेर बोराका बोरा यार्सागुम्बा पठाई दिन्थे, भनिन्छ लंडबहादुरसंग यार्सागुम्बाको त गोदाम नै थियो आर्काको पोईको लागी उनको यो भावना कदरयोग्य छ । लंडबहादुर राणाको चिक्ने क्षमता, पुती चाट्ने कला, र बररर आँशु नै झर्ने गरेर दूध टोकिदिने बानीको सधैँ सम्मान गर्छु । ठुलो लाँडो, अभूतपुर्ब सेक्स पावरले गर्दा उनले देश बिदेशमा तहल्का मच्चाइदिए । स्वास्नीको लंडबहादुरसंग लसपस भएको थाह भएर अंग्रेजहरुलाई पर्याप्त पीड़ा भएपनि यार्सागुम्बा खान पाइने लोभले उनिहरुले निरन्तर रूपमा स्वास्नीहरु लाइ नेपाल आउने अनुमति दिन्थे व्यक्तित्वका दृष्टिले लंडबहादुर लोभलाग्दा पुरुष हुन् ।
चिक्नुलाइ पाप भन्नेहरू पनि कम छैनन् हाम्रो समाजमा । चिक्नुलाइ पाप मान्नेहरूको भनाइ नै सही मान्ने हो भने तीनले छोरा छोरी कसरी पाए त? चिक्ने बिषयमा म एकजना सुग्घरी चिकुवा खेलाडीदेखि म साह्रै प्रभावित छु । मलाई प्रभाव पारेको चिकुवा खेलाडी हुन्- चिकेन्द्रमान जुक्छे । ‘संधै चिक्नु पर्छ’ पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका चिकेन्द्र साह्रै सफा चिकुवा नेता मानिन्छन् । चिकाई प्रति अत्यन्तै संवेदनशील नेता चिकेन्द्रसँग पदलोलुपता कत्ति पनि छैन । सेक्स पावरले भरिपूर्ण चिकुवा व्यक्तित्व उनी जो पायो त्यही भालू चिक्दैनन । आज एउटाकी स्वास्नी, भोली अर्की रण्डी चिक्दै हिँड्नुपरेको छैन, उनलाई । हरेक राती पाँचवटी सिल नफुटेका तरुनी चिक्न सक्ने हैसियत छ, उनको तर, उनले त्यसो गर्दैनन । तर उनलाई चिक्नु पहिले दुबैजना नुहाएर सफा हुनु पर्छ अनि मात्र चिक्ने बानी छ सफा पुतीबाट फूसिको भल निकालेर जिब्रो घुसाउन मन पराऊँछन उनी उनको एक पटक झर्ने बेलासम्म आइमाई ५ पटक झारिसकेका हुन्छन् यस्तो अदभुत खूबी छ उनीमा
भियग्रा प्रति मरिहत्ते नगर्ने साधारण जीवनपद्धति भएका यस्ताले पो चिकुवाहरुको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । पुती चिकाउनेमा बीस वर्ष एक महिना बिताइसकेँ मैले । यत्तिका अवधिमा पुरुष सहकर्मीसँगै धेरैजसो चिकाई भयो । उठबस भयो । पुती चिकाउने व्यवसाय अँगालेपछि धेरैसँग भेट भयो/हुन्छ । सभा-समारोहमा चिकाउन नगई सुखै छैन । तर चिक्ने सबै पुरुष उस्तै छैनन् । कोई कोई को लाँडो त पुतीमा हालेर हल्लिन पनि नपाऊँदै झरी हाल्छ औसतभन्दा पनि कम यौनशक्ति भएका पुरुष धेरै छन् । पुती चिकाउनेमा मलाई प्रभाव पार्ने बौद्धिक पुरुष लाँडेप्रकाश गुलेपाठी हुन् । उनको घोप्टी पारेर कुकुर कट हान्ने र ग़ुला पनि छिराउने कला मलाई असाध्यै मन पर्छन् । अबौद्धिक पुरुषसँग म चिकाउन सक्दिनँ, चाहन्नँ, पुतीको प्वाल कता हो, चाकको प्वाल कता हो, लाँडो कहाँ हाल्ने हो केही थाह हुदैन तिनलाई। धित मार्ने गरी चिक्न सक्ने पुरुषलाई म सम्मान गर्छु । यस्ता पुरुषले ब्लू फिल्म नियमित हेर्ने गरेका हुन्छन् र नयाँ आसन जानेका हुन्छन्। हिजोआज घरमा पुती हुँदा हुँदै ट्वाईलेटमा गएर छोल्ने पुरुष धेरै छन् । यस्ता पुरुषहरु अगाडी महिलालाइ देखेपछि चिक्न लगाउने हुन कि भनेर डराऊँछन। मलाई उनीहरू एकदम नामर्द लाग्छन् । पुतीप्रति निष्ठा र समर्पण भएका पुरुषमा मलाई सरुपुती अब्बल लाग्छन् । पुतीको नामबाटै आफ्नो नाम राख्न चाहे उनले । यौन सम्बन्ध सफल नभए पनि पुतीकै नाममा छोल्दै आजीवन अविवाहित रहे सरुपुती ।
Labels: नेपाली उत्तेजित कथा
आमा छोरी दुबै लाई पालो पालो गरी चिक्दै बसे
म समान delivery गर्न को लागि एक हाउस म पुगेको थिए । त्यहाँ एक पिता अनि उनका ३ छोरी हरु आमा सँग बस्थे । म भित्र प्रवेश गर्न मात्र अन्टेको थिए...
मेरो यौनको पहिलो अनुभुती
त्यस ताका म १८ बर्षको थिए, कलेज पढन पहाडबाट मधेश झरेको, हट्टाकट्टा जवान थिए, डेरा बस्न थाले पल्लो कोठामा पनि म सँगै पढने साथी र उनको मुमा र...
१४ वर्ष को केटी लाई चिक्दा
स्कूल विदाको मौका पारेर एक दिन म घिमिरेको घरमा आफ्नो कुत्सित मनोकांक्षा पूरा गर्न भनेर छिरें । सदैझैं कोपिला घरमै थिइन कविता पनि टीभीमा कार्...
मै दीपेश २४ साल का मुम्बैई मे रहता हूं। मेरी हाईट ५.६” गोर रंग और सबसे महत्त्वपूर्ण कि मेरा लंड ८” का है जिसे सारी लड़कियां, भाभियां और आंटि...
मेरो नाम अनिता हो । म २२ वर्षकी भएं । म डिगरिमा पढ्छु । क्याम्पियन कलेजको घटनाबारे तपाईहरुलाइ थहै छ होला । म त्यहि बाताबरनमा हुर्केकी केटि ह...
नाङ्गो फोटो ...
कामको कारण भुषण साइतमै बसेको थियो। अनि स्कूलमा बिदा भएकोले केटाकेटी सहित तारा पनि साइतमै आइरहेको थियो। प्रोजेक्टको क्वार्टरमा कोठाहरु यथेस्त...
मलाई मिसले १२ बर्षको उमेरमा चिक्न सिकाउनु भयो
धेरै बर्ष अगाडिको (२०३१ साल) कुरो हो | त्यो बेलामा नेपालमा रास्ट्रीय बिकास सेवा (रा वी से ) कार्यक्रम अन्तर्गत त्रिभुवन विश्व विध्यालयमा एम...
नेपाली छाडा जोक्स
छोरा : ड्याड बर्बादै भयो, दाईले ढोकै खोल्दैन । ड्याड : सुत्दै होला नि, हिजो उसको सुहागरात हो त । छोरा : हिजो राती दाईले कोल्डक्रिम माग्याथ्य...
एस्तो पो चिकाइ
धेरै पछी म आफ्नो अनुभब बताउदै छु । मेरो छिमेकी दाजु अफिसको कामले तीन महिना बिदेश जानु परेकोले भाउजुले मलाई घर कुर्न बोलाइ रहन्थिन । मिठा मिठ...
भाउजु को दुध
भाउजु को दुध देखेर म निकै उताउलो हुन्थे थिईन पनि भाउजु एकदम कामुक घर नजिकै को प्रेम श्रेष्ठ दाईको बुढी । दाईको मोटरसाइकल गएको देखे पछी म गईह...
दीपा, म र केटाहरु
Bollywood Calendar 2012
कामदेवको कथा…(Long Version)
नीता भाउजु सँग ...
Sexy Katrina Kaif's Picture Collection
बेइमान शिब र अन्जान साँडे
कोदो बारी मा निता
लाहुरे को बुढी
उनलाई सन्तुष्ठ बनाए
धेरै याद आउछ...
दीपा र म
ऐया दुख्यो क्या..
कम्प्युटरको स्क्रिनमा ...
खाट कराउदै थियो चुइ चुई ...
खोई निद्रै लागेन ...
दुधको पोका ...
आइमाइको स्वाद ....
अंगालो मारेर ...
शकुन्तलाको मालिस गर्दा पुतीमा आँखा पुगो
रातभरमा चार चोटी चिके
साबित्राको घमन्ड चिकाइपछी सकियो
भुषण र तारा
मेरो पहिलो अनुभव
शोभाको रसिलो पुती
बौद्धका रमाइला दिन
मलाई बल्ल सेक्सको स्वाद थाहा भयो
बाउले रन्डि बनायो
टाइट पुतीमा चिक्न पाउँदा
पल्लो घरको झ्याल ....
Selena Gomez is Busting Out of Her Bikini